Ideecada BBC-da Ayaa Sheegtay in Saraakiil Sare oo ONLF ah Dagal Lagu Dilay – Rasaasa News
May 11, 2010 Ideecada BBC-da ayaa Sheegtay in Saraakiil Sare ONLF ah Dagal Lagu Dilay
Sida ay sheegtay ideecada BBC-du, waxaa ETV laga sii daayey war sheegay in la dilay saraakiil sare oo ka tirsan ururka onlf, ka dib kolkii uu dagaal ku dhex maray ciidanka booliska ee Itobiya iyo dagaalyahanada ururka onlf meelo ka tirsan gabalka Jarar iyo Gabalka Doolo. Halkan codka ka dhagayso
Ideecada ayaa sheegtay in tirada dagaalyahanada la laayey ay gaadhayaan 17, 3 ka mid ahana yihiin saraakiisha hogaaminta ee ururka onlf.
Ururka oo onlf, ayaan ilaa iyo hada laga haynin wax war ah af iyo qoraal midna oo beeninaya ama xaqiijinaya warka ay Itobiya sheegtay.
Ideecada BBC-da ayaa damacday in ay waraysato hogaaminta ururka ONLF oo iyagu laba garab ah, garabka uu hogaamiyo Eng. Salaaxudiin Cabdiraxmaan Xaaji Macow ayaa beeniyey in ayna waxba ka jirin warka ay Itobiya sheegatay.
Garabka uu hogaamiyo gudoomiyihii hore ee ONLF, Maxamed Cumar cismaan [Jwxo-shiil], ayaa la waayey wax lagala hadlo warka ay Itobiya sheegtay, khilaaf iyaga dhexdoodayaal awgiis.
Maxamed Cumar Cismaan, ayey kooxdiisa isku hayaan in uu awooda uu qaybiyo, waxayna ku eedaynayaan in uu isagu amarka ugu hooseeya iyo ka ugu sareeya uu bixiyo sida; Jaaliyad, Milatari iyo siyaasadba.
Si kastaba arintu ha ahaatee, waxaa xaqiiq ah in uu ururku gabaabsi yahay dhinac walba, iyada oo ay ugu wacan tahay sida la sheego, Maxamed Cumar Cismaan [Jwxo-shiil]. Waxaa la sheegaa in uu ururka dhex dhigay qabyaalad, xukun jacayl iyo madax adayg ay ugu wacan tahaybaa la yidhi dhaqankiisa ciidanimo.
ONLF, ayaa awal hore hadii uu wax ka dhaco gudaha Somalida Ogadeeniya ideecadaha u kala tartami jiray, meesha xiligan la la,a yahay ruux qudha oo u hadla labada garaba.
Dhabar jabka ugu wayn ee ururka onlf, waxaa ay dhacday, ka dib kolkii bilowgii sanadkii 2009, uu ururku dhexdiisa ku dilay xubnihii ugu muhiimsanaa ururka hogaaminta ee onlf.